नायिका रेखाले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै - Movies Club Nepal
Home NewsKollyhood	नायिका रेखाले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै
by Movie Club Nepal ५ भाद्र २०७६, बिहीबार १२:३१ November 22, 2019
५ भाद्र २०७६, बिहीबार १२:३१ November 22, 2019
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी स्टार नायिका रेखा थापा आज आफ्नो जन्मदिन मनाउँदैछिन् । मोरङमा जन्मिएकी रेखाले चलचित्र ‘हिरो’बाट नेपाली रजतपटको यात्रा तय गरेकी थिइन् । जन्मदिन भोलि मात्र भए पनि उनका शुभ चिन्तक तथा दर्शकहरुले हिजो देखि शुभकामना शन्देश सामाजिक संजालमा दिरहेका थिए ।
नेपालमा नायिका निरुता सिंह, विपना थापा लगायतका नायिकाहरुले सारी, चोलोमा दबदबा कायम गरिरहेको समयमा रेखा चलचित्रमा आएकी थिइन् । यसपछि, उनको दबदबा चलचित्रमा सुरु भएको थियो जुन आज पनि कायमै छ । कुनै बेला रेखा छोटो पहिरन लगाएका कारण सर्वाधिक चर्चामा थिइन् ।
यदि, नेपालमा कुनै नायिकाको स्टार पावर छ भने त्यो रेखा थापाको मात्रै छ । उनका चलचित्रहरुमा महिला सशक्तिकरणका बिषयलाई जोडदारका साथ उठान गरेको पाइन्छ । उनले महिला आवाजलाई चलचित्रमा प्राय: पस्किने प्रयास गरेकी हुन्छिन । रेखाको करिअर चलचित्रमा मात्र सिमित छैन । विशेषगरि, उनी राजनीतिमा पनि चर्चित छिन् । ‘रेखा थापा फाउन्डेशन’बाट रेखा समाजसेवामा पनि सक्रिय छिन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा शक्तिशाली चलचित्रकर्मीको सूचीमा रेखा अग्रपंक्तिमा आउँछिन् । रेखालाई जन्मदिनको अवसरमा मुभी क्लब नेपालको तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
पूजाको प्रश्न बोर्ड अध्यक्षलाई !
२३ श्रावण २०७५, बुधबार १६:४४
आशिरमान र शिल्पाको ‘लिपलक’
१५ मंसिर २०७५, शनिबार १२:२६
पूजाको रोजाइ सोनम तर आकाश ?
१४ माघ २०७५, सोमबार १५:१४
‘अनुराग’लाई सफल मान्नेकी असफल !
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १५:१७
चलचित्र ‘गोपी’को छायांकन आरम्भ !
४ भाद्र २०७५, सोमबार १३:१५
‘कहिँ कतै’ आज बाट सिनेमा घरमा
२५ श्रावण २०७५, शुक्रबार १५:४५